Isutagga Imaaraatka Carabta Xalaal Safar - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Imaaraatka Carabta Xalaal Safar
Xaaladda Covid-19 ee Imaaraadka Carabta
The United Arab Emirates (Carabi: دولة الإمارات العربية المتحدة) waa isku-xidhka toddobo imaaradood oo ku yaal dhinaca bari ee Jasiiradda Carabta, irridda laga galo Gacanka Beershiya. Waxay leedahay xeebno ku yaal Gacanka Cumaan iyo Gacanka Beershiya. Dowladaha deriska waa Saudi Arabia galbeedka iyo koonfur-galbeed, iyo Cumaan bariga iyo koonfur-bari, oo ay ku jiraan Cumaan oo ka tirsan Jasiiradda Musandam iyo Madha. Waa waddan hodan ku ah taariikhda iyo dhaqanka waana bar fudud oo laga bilaabi karo safarada Bariga Dhexe.
Imaarada Abu Dhabi (Abu Dhabi iyo Al Ain)
Emirate of Dubai (Dubai iyo Hatta)
Emirate of Sharjah (Sharjah, Dibba, Kalba iyo Khor Fakkan)
Imaarada Ajman (Ajman)
Imaaradii Ummu al Quwain (Ummu al Quwain)
Imaarada Ra's al Khaymah (Ra's al Khaymah)
Imaarada Fujairah (Fujairah)
Kuwa ugu waaweyn illaa iyo hadda is Abu Dhabi, halka laga yaabo in sida ugu fiican loo yaqaan ay tahay Dubai.
Abu Dhabi - Caasimadda Imaaraadka.
Ajman - Imaarada ugu yar, mid ka mid ah ka meelaha miisaaniyada loo tagayo.
Al Ain - Inland oo u dhow magaalada xadka ay la wadaagto Cumaan ee Buraimi, Al Ain wuxuu ka kooban yahay saddexagal u dhexeeya magaalooyinka saxda ah ee Abu Dhabi iyo Dubai.
Dubai - Goobta ugu badan ee laga soo galo dadka safra, waa xarunta gaadiidka iyo ganacsiga iyo magaalada ugu weyn ee UAE.
Fujairah - Imaarad kale, oo xusid mudan inay tahay mida kaliya ee aan daganayn gacanka Beershiya.
Hatta - Tuulo ka tirsan Emirate-ka Dubai.
Dubai / Jebel Ali - Magaalo deked leh.
Sharjah - Meel aad u jaban, boodh iyo fowdo meelaha laakiin leh soo jiidasho u gaar ah.
Liwa Oasis - waa koox tuulooyin ah oo ku teedsan aagag ku yaal cidhifka Quarter Faaruq.
Ruwais - waa magaalo balaadhinaysa imaarada Abu Dhabi.
Dawladaha Xorta ah ee Gacanka Beershiya waxay ahaayeen ilaaliyayaal Ingiriis 1820-1968; wixii ka dambeeyay 1971 waxay noqdeen Imaaraatka Carabta.
Isutagga Imaaraatka Carabta (UAE) waa dal casri ah oo firfircoon. Qaarkood, waa waddan horumarsan oo nadiif ah, kuwa kalena waa dalxiis "Disneyland". Inta badan dalxiisayaasha reer Galbeedka, Imaaraadku waxay bixiyaan jawi si aad ah loo yaqaan. Xarumaha waa kuwo si aan caadi aheyn u casriyeysan, oo laga buuxiyo wax kasta oo alaab ah oo laga heli karo Galbeedka (badbaadi waxyaabaha galmada ku cad - filimada waa la faafreebaa, sidoo kale majaladaha qaarkood). Dhinaca aan si fiican loo aqoon ee Imaaraatka waxaa ka mid ah godad lama degaan ah oo aad u durugsan oo cidhifka Quarter-ka Bannaanka ah iyo xarago, wadis cabsi badan oo woqooyi-bari xadka la leh Cumaan.
Wadooyinka iyo tas-hiilaadka kale ee bulshada waa kuwo casri ah haddii, mararka qaarkood, dad aad u badan. Dukaammada waaweyni waxay soo bandhigaan noocyo badan oo alaab ah oo ka yimid Yurub iyo Mareykanka, taas oo kuxiran dukaanka, oo ay weheliyaan alaabooyinka maxalliga ah iyo kuwa gobollada. Silsiladaha waaweyn ee caalamiga ah sida Ikea, Carrefour, iyo Geant waxay leeyihiin joogitaanno iyo silsilado cunno dhakhso leh (ku dhowaad dhammaantiis Mareykanka) sida McDonald's iyo KFC oo si ballaaran u shaqeeya. Dhinaca kale, weli waxaa jira dhaqanno yar oo dad badani ku badan yihiin suuks oo ay ka buuxaan badeecooyin ka kala yimid adduunka oo dhan iyo dukaamada roogga. Kuwani way adkaan karaan in loo helo celceliska socotada, maadaama suuqyada ay u muuqdaan inay helayaan feejignaan aad u tiro badan. (Ka soo horjeedda waxa lagu daabacay buugaagta tilmaamaha qaarkood, souksyada ku jira) Abu Dhabi waxaa la jeexjeexay 2006 mana sii jiraan. Soukooyinka ku jira Dubai wali waa cajiib in la baaro, in kastoo.)
Khamriga waxaa si ballaaran looga heli karaa maqaaxiyo badan iyo baarar ku yaal Dubai iyo hudheelada dalxiiska ee imaarado kale oo dhan badbaadi Sharjah. Waxaa jira shuruudo sharci ah laakiin gebi ahaanba la iska indhatiray oo loo haysto ruqsad lagu iibsado khamriga dukaamada khamriga (kuwaas oo ay yar yihiin). Ruqsadda khamrigu waxay caddeyn u tahay in qofka sidanayaa uu yahay qof aan Muslim ahayn. Baasaboor kuma filnaan doono. Si kastaba ha noqotee, waxaad ka iibsan kartaa khamriga canshuur la'aan garoonka diyaaradaha si aad u keento Imaaraadka. Imaarada Sharjah gebi ahaanba way qalalan tahay. Shatiga qamriga waxaa looga baahan yahay imaarada Dubai, Abu Dhabi, Iyo ajman; imaaradaha haray ee Ra's al Khaymah, Fujairah, iyo Umm al Quwain uma baahna nooc shati ah. Shuruudda mararka qaarkood waa la iska indhatiraa dukaamada qaarkood.
Siyaasadda Imaaraadka Carabta
Isutagga Imaaraatka Carabta waa federaal ka kooban toddobo imaaradood, mid walbana waa boqortooyo buuxda oo uu madax u yahay sheekh (ama taliye) u gaar ah. Emirate kasta wuxuu hayaa ismaamul aad u tiro badan, mid walbana wuxuu leeyahay sharciyadiisa. Taliyayaasha - ama sheekhyada - imaaraad kasta waa la qadariyo oo leh awood muuqata. Tusaale ahaan, Dubai waa mid horumarsan wuxuuna noqdey mid caan ah isla markaana noqda meel dalxiis oo aad u weyn. Sheekha xukuma Sharjah waa mid aad u xagjir ah una ololeeya waxbarashada, sidaas darteed Sharjah waxay martigalisaa jaamacado badan shuruucduna way ka adagyihiin khamriga Aragti ahaan, Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha waxaa doorta Golaha Sare ee Federaalka, oo ka kooban sheekhyada mid kasta oo ka mid ah toddobada imaaradood. Ficil ahaan, sheekha Abu Dhabi marwalba waxaa loo doortaa Madaxweyne halka sheekha Dubai waxaa marwalba loo doortaa raiisul wasaare, isagoo xilalka haya Qolyihii dhaxaltooyo.
Dalku si aan caadi ahayn ayuu u qalalan yahay, sanadkiiba wuxuu helaa dhawr maalmood oo roob ah. Si kastaba ha noqotee, isticmaalka biyuhu aad buu u sarreeyaa, oo leh caws ballaadhan oo ku yaal jardiinooyinka waawayn ee dadweynaha iyo dhul-dhigistu waxay ku ballaadhi karaan meelaha loo dalxiis tago ama meelaha kale ee caamka ah. Inta badan biyahani waxay ka yimaadaan milanaynta. Cimilada laga bilaabo dhammaadka Oktoobar illaa bartamaha Maarso waa mid aad u wanaagsan, oo leh heer-kul kulma heer sare illaa 27 ° C (85 ° F) illaa hoose illaa 15 ° C (63 ° F). Had iyo jeer waa cadceed. Roobku wuxuu da’in karaa inta u dhexeysa Nofeembar iyo Febraayo, wuxuuna sababi karaa qatarta waddooyinka marka uu da’o. Xilliga kuleylaha, heer kulka cirka iyo huurka ayaa ku dhow wax aan loo dulqaadan karin - waxaa si weyn looga shakisan yahay in heerkulka rasmiga ah ee la soo sheegay "lagu xardhay" si loo gooyo xagaaga runta ah ee sarreeya, kaas oo ka gudbi kara 50 ° C, ama 120 ° F.
Dadku aad ayey u kala duwan yihiin. Kaliya 20% ayaa dhalasho ahaan ka soo jeeda Emiratis; inta soo hartay waxay ka yimaadeen qaaradaha Hindiya: Hindiya, Pakistan, Bangladesh ama Sri Lanka (50%); qaybaha kale ee Aasiya, gaar ahaan Filibiin, iyo Malaysia; iyo wadamada reer galbeedka (Yurub, Australia, Waqooyiga Ameerika, Koonfur Afrika; 5-6%), iyada oo inta soo hartay meel kasta oo kale. Maalin kasta oo la siiyo gudaha Dubai ama Sharjah, tusaale ahaan, waxaad arki kartaa dad ka socda qaarad kasta iyo dabaqad kasta oo bulsho. Kala duwanaanshahan kala duwanaanta, mid ka mid ah waxyaalaha mideeya ee yar ayaa ah luqadda, oo sidaas awgeed qof walbaa wuxuu ku hadlaa nooc ka mid ah Ingiriisiga. Dhammaan calaamadaha wadada ama macluumaadka kale waxay ku qoran yihiin Ingiriis iyo Carabi, iyo Ingiriisiga si ballaaran ayaa looga hadlaa, gaar ahaan warshadaha soo-dhoweynta.
Toddobaadka dhammaadka ee UAE inta badan dowladda iyo adeegyada bulshada iyo sidoo kale ganacsiyada ayaa laga bilaabaa Jimcaha ilaa Sabtida; dad badan, Khamiista waxay noqon kartaa maalin badhkeed (in kasta oo badiyaa ay shaqeeyaan maalinta oo dhan Sabtiyada). Ku dhowaad magaalo kasta, dhaqdhaqaaqa ganacsiga waa la xidhi doonaa subaxa Jimcaha, laakiin wixii ka dambeeya adeegyada duhurkii ee masaajidda inta badan meheradaha waa furan yihiin oo fiidnimada Jimcaha waa la camiran karaa.
Waxa ugu weyn ee laga reebay waa inta lagu jiro bisha soon ee Ramadan, marka laxanka nolosha si weyn isu beddelo. Makhaayadaha (bannaanka hoteellada dalxiiska) way xirnaadaan inta lagu jiro saacadaha maalinta, in kasta oo inta badan xafiisyada iyo dukaamada ay furan yihiin subaxnimadii 8da subaxnimo ilaa 2da duhurnimo ama wax la mid ah, badanaa waxay xirmaan galabtii inta dadku sugaan (ama seexdaan) saacadaha ugu dambeeya soonka. . Gabbal dhaca ka dib, dadku waxay isu yimaadaan si ay ugu afuraan cunto loo yaqaan afurka, badanaa lagu qabtaa teendhooyinka bannaanka (ma aha wax aan caadi ahayn hawo-qaboojiyaha Imaaraadka), taas oo dhaqan ahaan ku bilaabata timir iyo cabitaan macaan. Xafiisyada qaar ayaa dib loo furaa wixii ka dambeeya 8PM ama wixii ka dambeeya waxayna si fiican u furnaadaan wixii ka dambeeya saqda dhexe, maadaama dad badani ay soo daahaan illaa saacadaha subaxnimada. Wax yar ka hor qorrax ka soo baxa, ayaa loo yeedhay cunto soor waa la cunaa, ka dibna wareegga ayaa mar kale soo noqnoqda.
Taariikhda Imaaraatka Carabta
Imaatinka ergooyin ka yimid nebigii islaamka ee Muxammad 630 wuxuu cadeeyay in gobolku islaamay. Muxammad ka dib, mid ka mid ah dagaalladii waaweynaa ee lagu qaaday Dibba waxaa ka dhashay jabka kuwii aan muslimiinta ahayn iyo guul Islaamku ka gaadhay Jasiiradda Carabta.
Sheekhadii 7da imaaradood waxay isla garteen inay noqdaan maxmiyad Ingiriis 1892, waxaana loo yaqaanay Dawladaha Trucial. Isutagga Imaaraatka Carabtu wuxuu ku dhawaaqay madaxbanaanida ka Boqortooyada Ingiriiska markay ahayd 2dii Diseembar 1971 markii amiirradii Abu Dhabi iyo Dubai go'aansaday in la sameeyo urur shaqaale.
Gelitaanku wuxuu noqon doonaa waa diiday muwaadiniinta reer binu Israa'iil. Safrayaasha haysta baasaboorada aan Israaiil ahayn ee haysta shaambadaha iyo / ama fiisooyinka Israel ka timid waa la oggol yahay si ay u galaan.
Siyaasadda Visa ee UAE
Muwaadiniinta Wadamada Iskaashiga Khaliijka (GCC) (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar iyo Saudi Arabia) uma baahna fiiso. Fiiso joogitaan oo gaaban ayaa la siin doonaa markay yimaadaan dadka deggan waddamada xubnaha ka ah GCC sidoo kale iyadoon loo eegin jinsiyadda.
Muwaadiniinta inta badan dalalka warshadaha horumaray waxay helaan fiiso 30 maalmood ah oo lagu shaabadeeyey Baasaboorkooda oo lacag la’aan ah markay yimaadaan. Tan waxaa lagu dheereyn karaa ilaa 90 maalmood kadib imaatinka iyadoo laga qaadayo khidmadda Dhs 500. Wadamadu waa Andorra, Australia, Austria, Belgium, Brunei, Bulgaria, Canada, Shiinaha, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Danmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau, Malaysia, Malta, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia (waa la kordhin karaa ilaa 30 maalmood ka dib imaanshahooda), San Marino, Seychelles, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Boqortooyada Ingiriiska (marka laga reebo baasaboorada BN (O)), United States iyo Magaalada Vatican.
Dhowr waddan oo kale ayaa xaq u leh fiisooyin hudheello dalxiis oo dalxiis loo dalxiis tago oo bilaash ah. Ka eeg Isdhexgalka UAE faahfaahinta ugu dambeysa.
Dhamaan jinsiyadaha kale waxaa looga baahan yahay inay dalbadaan fiiso hore, taas oo u baahan doonta kafaala-qaade ka yimaada gudaha UAE. Wakiilkaaga safarka ayaa sida caadiga awoodi doona ama kuu diyaarin doona adiga. Kharashka fiisada illaa 2015 waa 250 dirham oo lagu daray khidmadda wakaaladda socdaalka muddo 30 maalmood ah gelitaan keliya, mana jiraan wax kordhin oo la heli karo mar dambe. Canshuuraha fiisaha cusub iyo sharciga ayaa ah in laga fogaado dalxiisayaasha inay shaqo ka raadsadaan UAE. Halka fiisaha transit-ka ee ay kafaala qaadayaan shirkadaha duulimaadka 96 saacadood transit-ka ay tahay 100 dirham.
Muwaadiniinta Israa’iil ayaa dowladda Imaaraatka Carabta ka mamnuucday inay soo galaan dalkeeda.
Haddii aad ka soo safreyso waddan ku yaal Koonfurta Aasiya, hel shaabad ah 'OK to Board'. Inta badan waxaa diyaarinaya wakiilkaaga safarka. Haddii aysan ahayn, sida ugu dhakhsaha badan ee aad fiisahaaga u hesho, qaado, baasaboorkaaga iyo tigidhkaaga xafiiskaaga duulimaadka oo qaado shaabadda 'Hagaya inaad raacdo' Taas la'aanteed waxaa laga yaabaa inaan laguu oggolaan inaad u safarto UAE.
Baasaboorrada waa inay ahaadaan kuwo shaqeynaya 6 bilood laga bilaabo taariikhda imaanshaha.
Qof kasta oo qaangaar ah oo aan Muslim ahayn ayaa soo qaadan kara afar shay oo khamri ah, tusaale ahaan afar dhalo oo khamri ah, ama afar dhalo oo ruuxi ah, ama afar kiis oo biir ah (iyadoon loo eegin aalkolada).
Imaaraadku wuxuu qaadayaa khad adag oo sumcad xumo leh daawo, oo leh daawooyin badan oo caan ah, gaar ahaan wax kasta oo ay ku jiraan Koodhin, diazepam (Valium) ama dextromethorphan (Robitussin) in lagaa mamnuuco inaad adigu leedahay mooyee nootaayo oo la xaqiijiyey warqadda dhakhtarka Soo-booqdayaasha jabiya sharciyada, xitaa si kama 'ah, waxay isku arkeen in la masaafuriyay ama la xiray. UAEinteract waxay haysaa liiska daawooyinka la xakameeyo.
Xitaa ha ka fikirin inaad soo qaadato waxyaabaha maanka dooriya: haysashada xitaa qaddarka raadraaca waxay keeneysaa ugu yaraan afar sano oo xabsi ah. Isticmaalka qaadka / qaadka (dhir ubax leh oo ay kujiraan alkaloid loo yaqaan cathinone) oo caan ka ah wadamada kale ee u dhow (gaar ahaan Yemen) sidoo kale waa sharci daro, iyadoo suurtagal ah in lagu xukumo xabsi daa'in.
Dubai Madaarka Caalamiga ah
Xarunta ugu weyn ee gaadiidka cirka ee Imaaraatka Carabta waa Garoonka Dubai International. Madaarkan waxaa ka shaqeeya dhowr shirkado duulimaad oo waaweyn, gaar ahaan kuwa laga leeyahay Dubai Emirates. Duulimaadyada tooska ah waxay isku xiraan Dubai illaa Durban, Johannesburg, London, Sydney, Melbourne, Karachi, Tehran, Riyadh, Mumbai, Kolkata, Hong Kong, Paris, Zurich, Airport Frankfurt, Milan, Madrid – Barajas Airport, New York City, Los Angeles International Airport , Madaarka Caalamiga ah ee San Francisco, Toronto, São Paulo iyo magaalooyin badan oo waaweyn oo ku yaal Yurub, Aasiya, Oceania iyo Afrika. Fursadaha ayaa ah kuwa xamuulka ka ah dalkaaga waxay kuu fidin doonaan duulimaadyo Dubai
Garoonka Diyaaradaha Abu Dhabi (Abu Dhabi). Dubia kadib garoonkan garoonku wuxuu leeyahay xidhiidhada caalamiga ah ee xiga ee ugu wanaagsan. Calan qaade fadhigiisu yahay Abu Dhabi Etihad Airways hadda waxay bixisaa duulimaadyo toos ah oo ka yimaada New York, Toronto iyo garoomo kale oo badan oo ku yaal Yurub iyo Aasiya. Duulimaadyada kale ee waaweyn ee u adeega Abu Dhabi waxaa ka mid ah British Airways oo ka tagta garoonka diyaaradaha Heathrow, KLM oo ka socota Schiphol Airport iyo Lufthansa oo ka socda Frankfurt.
Duulimaadyo qiimo jaban
Duulimaadyada qiimaha jaban,
Air arabia waxay xarun ka sameysatay garoonka diyaaradaha Sharjah (oo aad ugu dhow Dubai), waxayna halkaas uga duusha magaalooyin badan oo ku yaal Afrika, Yurub, Bariga Dhexe iyo Hindiya.
Cebu pacific ka duuli Dubai ilaa Manila ee Filibiin iyada oo qiimaha laga raaco ugu yaraan $ 150 doolar.
Duuli Dubai ka duuli Dubai oo aado Bariga Dhexe, Yurub, Afrika iyo Hindiya.
Shirkadaha diyaaradaha ee Pegasus ka duuli Dubai oo aado magaalooyin badan oo Yurub ah.
Wizzair ka duuli Dubai oo aado magaalooyin badan oo Yurub ah.
Shirkadaha diyaaradaha ee Smartwings ka duuli Dubai oo aado magaalooyin badan oo Yurub ah.
Norway u duuli magaalooyin badan oo ku yaal Yurub iyo Waqooyiga Ameerika
Waxa jirta marin marin loo maro Imaaraatka Carabta oo laga bilaabo Saudi Arabia koonfurta iyo Cumaan bariga. Dhammaan waddooyinka waaweyn ee Imaaraadka waxay ku sugan yihiin xaalad aad u wanaagsan, laakiin waxaa jira gaadiid aad u fara badan oo u dhexeeya Sharjah iyo Dubai, iyo 4 dh lacag ah si looga gudbo iridda lacagta ee Salik. Salik Tag oo horay loo sii siiyay ayaa tan looga baahan yahay.
Waxaa jira adeeg markab laba-toddobaadle ah oo ka yimaada Bandar Abbas ee Iiraan illaa dekedda Sharjah oo ay waddo shirkadda maraakiibta Iran ee Valfajre-8. Waa doonni habeenki qaadata 10-12 saacadood, oo baxa habeennadii hore Axadda iyo Khamiista. Qiimuhu wuxuu ka bilaabmayaa 160 dirhams oo loogu talagalay heerka dhaqaalaha.
Marka laga reebo adeegyada caadiga ah, waxaa jira shabakad dhaqameed weyn doon jidadka ganacsiga ee alaabada u gudbiya dhammaan Khaliijka iyo xitaa Hindiya. Waxaa laga yaabaa inay suurtagal tahay in lagu iibsado marinka mid ka mid ah doomahaas. Iyada oo ku xidhan hadba doonyaha aad ku dhammaato waxay ka wici karaan dhammaan magaalooyinka xeebta ku yaal ee UAE, oo ay ku jiraan Dubai iyo Abu Dhabi.
Masaafada Imaaraadku way yartahay, waana jiraan Dubai Adeegga tareenka Metro wuxuu kugu xiraa dhowr saldhig oo ku yaal gudaha iyo hareeraha Dubai kaliya. The Dubai Waqtiyada ugu sareeya ee Metro waa subaxa hore iyo fiidka hore. Waxaa jira 3 fasal oo ay bixiyaan Dubai Metro: Fasal Silver ah, oo ay isticmaalaan dadka dabaqadda shaqeeya maalin kasta; Fasalka Haweenka, oo kaliya loogu talagalay haweenka iyo carruurta; iyo Fasalka Dahabka. Waxaad heli kartaa kaararka bil kasta ee fasal kasta haddii aad tahay safar socdaal ah. Metro-ga sidoo kale wuxuu ku xiraa basaska dadweynaha markii aad ka degto saldhigga. Waxa kale oo aad qorshayn kartaa khadkaaga khadka tooska ah ee internetka ee ah www.rta.ae. Ku safridda metro waxay leedahay qiimayaal u gaar ah maaddaama ay qiimo jaban tahay, dhakhso badan tahay isla markaana intaasoo dhan aad arki karto Dubai socda. Wadooyinka guud ahaan xaaladoodu waa heer sare; si kastaba ha noqotee, calaamadaha ayaa ku liita qaar ka mid ah imaaradaha.
Gaadiidka dadweynaha ee magaalooyinka dhexdiisa ah ayaa wali ah tijaabo. Dubai waxay dhiseysaa nidaam monorail iyo tareen ballaaran, laakiin imaaradaha kale waxay bixiyaan gaadiid dadweyne oo aad u yar. Abu Dhabi waxay leedahay shabakad basaska magaalada ah oo safarkiiba ku kacaya 2 dirham haddii magaalada gudaheeda iyo DH4 halkii tirip ah oo magaalada ka baxsan oo si caddaalad ah loogu kalsoonaan karo, laakiin ay ku badnaan karaan ragga safarka ah. Adeegyada basaska magaalooyinka waa kuwo dhakhso badan, raaxo leh oo si macquul ah u soo noqnoqda.
In magaalooyinka Dubai, Abu Dhabi, iyo Sharjah, tagaasida si ballaaran ayaa loo heli karaa. Way ka jaban yihiin gudaha Abu Dhabi iyo Sharjah. U raaca meel kasta oo magaalada ka mid ah Abu Dhabi waxay ku kacaysaa ugu yaraan US $ 2, maaddaama ay ku qaadanayaan keliya masaafada safarka. Lacag dheeraad ah oo habeenkii ah oo ah US $ 3 ayaa lagu dari karaa 10PM kadib, taas oo kuxiran darawalkaaga.
Duufaan ciideed oo ku socota wadada weyn ee u dhaxeysa Sharjah iyo Dubai
Imaaraadku wuxuu leeyahay nidaam waddo casri ah. Ijaarashada baabuur ama wadista UAE waxay u baahan tahay liisan darawalnimo oo caalami ah, taas oo si fudud u tarjumeysa liisankaaga caadiga ah waxaana laga heli karaa urur baabuurta maxalliga ah. Haddii aad leedahay deganaansho UAE, waa inaad heshaa liisanka darawalnimada ee maxalliga ah. Tani waxay noqon kartaa hawl fudud oo ay tahay in la dhammaystiro waxaana lagu samayn karaa 20 daqiiqo laakiin waa haddii aad ka tirsan tahay liis cayiman oo waddamo ah (inta badan reer Galbeedka). Haddii aad ka timid waddan Aasiya ah, waa inaad soo martaa 40 fasalo oo ah iskuul wadista maxalliga ah oo aad ka gudubtaa imtixaan liisan oo aad u adag Tani way is beddeleysaa, in kastoo, waxaana laga yaabaa inay khuseyso dhammaan jinsiyadaha dhowaan.
Kirada baabuurta way ka jaban tahay tan Maraykanka. Waxaa jira khidmad go’an maalintii kiraynta gaariga, iyadoo lagu saleynayo baaxadda gaariga. Batroolka (baatrool) waa, heerarka Mareykanka iyo Yurub, waa qaali. Nidaamka waddadu wuxuu ku saleysan yahay heerarka Ingiriiska ama Yurub, oo leh wadooyin badan oo wareega ah iyo taraafikada si aad ah loo marsiiyo. Laakiin calaamadaha si fudud ayaa loo fahmi karaa waana meelaha ugu badan oo cad oo isku xidhan. Wadayaasha Imaaraatka, gaar ahaan aagagga magaalooyinka, waxay u muuqdaan kuwo dagaal badan oo inta badan adeegsada xeelado u dhexeeya nacasnimada ilaa masiibo. Tan waxaa laga yaabaa inay ka timaado taraafikada, oo si aad ah ugu ciriiri badan magaalooyinka, ama arrimo kale.
Dadka ku nool Imaaraadku way wadaan aad u dhakhso badan, qaarna waa gebi ahaanba taxaddar la'aan: ku-dhaafitaanka dhinaca midig waa qaanuunka, xadka xawaaraha waxaa iska indhatiray dad badan, xitaa gawaari culus. Isbedelka khadka labaad ee labaad wuxuu umuuqdaa inuu yahay isboorti qaran. Imaaraadku wuxuu leeyahay heerka saddexaad ee ugu sarreeya shilalka taraafikada ee adduunka (kaliya ka dambeeya Sucuudiga iyo Cumaan).
Si gaar ah u taxaddar marka aad aragto SUV-daaqad madoow ah habeenkii: daaqadaha madow waxay ka dhigayaan darawalka inuusan ku arkin oo wuxuu beddelaa haadka. Aragti ahaan mamnuuc, daaqadaha daasadda ayaa ku baahsan dhalinyarada Carabta waxayna guud ahaan la xiriirtaa xirfadaha wadista liidata iyo wadista degdegga ah.
Hadda waxaa jira khariidado magaalo oo wanaagsan, gaar ahaan loogu talagalay Dubai (ka Explorer taxane buugaag ah). La soco in dhismuhu socdo, mararka qaarna si dhakhso leh u beddelayo shabakadaha waddooyinka, sidaa darteed khariidaduhu waxay qabsanayaan oo keliya “waqtiga”. Sharjah weli khariidad liidata Websaydh ayaa bixiyay khariidadihii ugu horreeyay ee tooska ah ee Imaaraatka. Google Earth waxay bixisaa sawirro dayax gacmeed adag laakiin heer faahfaahsan u wanaagsan ujeeddooyin tixraac ballaadhan. La'aanta khariidado ama calaamado wanaagsan ayaa ka dhigaysa isticmaalka jiheeyaha ama GPS mararka qaarkood waxtar haddii aad rabto inaad ka baxdo jidka weyn.
Safarada lamadegaanka ama “wadi bashing” waa soojiidasho wanaagsan agagaarka Dubai, laakiin taxaddar weyn ayaa loo baahan yahay in la yeesho inta la dooranayo gaari la kireysto; waa inuu ahaadaa afar giraangir. Safarada lamadegaanka sidoo kale guud ahaan waxaa loogu talagalay wakiilada safarka waxayna ku siin karaan heshiis wanaagsan sidoo kale tirada.
Luqadda rasmiga ahi waa Carabi, in kasta oo dadka intiisa badani aanay runti ku hadlin. Qurbajoog ka timid Iiraan, Hindiya, Phillipines iyo wadamada reer galbeedka ayaa ka tiro badan carabta, gaar ahaan Dubai iyo Abu Dhabi (halkaasoo tirada ajaaniibta ay ka badan tahay 80%). Ingiriisigu waa luuqadda Faransiiska, iyo inta badan Emiratis waxay ku hadlaan si ay ula xiriiraan shaqaale badan oo qurbajoog ah oo u shaqeeya iyaga.
Luuqadaha sida weyn looga hadlo dalka Imaaraadka waxaa kamid ah Hindustani (Hindi & Urdu), Malayalam / Tamil, Farsi (Persian), iyo Tagalog (Filipino). Dadka badankood waxay haystaan ​​ugu yaraan amar aasaasi ah oo Ingiriis ah, in kastoo aysan ahayn wax aan caadi ahayn in lala kulmo dad Ingiriiskoodu xadidan yahay.
In Dubai, dukaamada, hudheelada, iyo meheradaha ganacsiga badankood waxay ku ganacsadaan Ingiriis. Guud ahaan marka laga hadlayo, Carabiga waxaa ku hadla waaxaha dowladda iyo booliska. Gudaha Abu Dhabi iyo Waqooyiga Imaaraatka, Carabiga aad ayaa loogu hadlaa.
Burburinta wejiga qarka leh ee Imaaraadka
Qaar ka mid ah ciidaha ugu waaweyn adduunka ee ku yaal koonfurta Abu Dhabi aagga Liwa Oasis
Xeebaha quruxda badan ee xeebta bari
Rugsan, wadis fog oo ku taal imaaradaha waqooyiga
Goobaha qadiimiga ah iyo qaababka dhagaxa dabiiciga ah ee Buuraha Xajar
Oases bilic leh oo ku yaal Al Ain
In kastoo jaleecada hore banaanka ay u muuqan karaan caajis iyo xiiso la'aan, oo xitaa khatar ku ah xaaladaha lamadegaanka, dhab ahaantii waxaa jira meelo dabiici ah oo layaableh oo Imaaraatka kajira - dhibtuna waxay tahay ogaanshaha meesha laga helo! Waxaa jira biyo-dhacyo daahir ah, buuro dhaadheer oo ay weheliyaan fosil, xitaa harooyinka biyaha macaan.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee diiradda la saarayo nolosha dalxiiska (marka laga reebo adeegsiga) ayaa ah xeebta. Biyaha Imaaraadku, in kasta oo ay xaqiiqdii yihiin kuwo daruuro leh sannadihii la soo dhaafay dhismaha xeebta oo culus awgood, weli way u yihiin kuwa ka yimaadda xeeladaha aan caadiga ahayn, si diiran, nadiif ah, oo qurux badan. Waxaa jira meelo dhaadheer oo xeebo-ciid ah, oo ka bilaabma gebi ahaanba horumar la'aan ilaa dalxiis aad u sarreeya (xitaa magaalooyinka sida Dubai). Kalluumeysiga iyo quusitaanku waxay noqon karaan wax aad u wanaagsan, gaar ahaan xeebta bari (Badweynta Hindiya). Baaxad weeyn oo cidla ah ayaa u fidsan koonfurta magaalooyinka waaweyn, iyagoo bixiya aragtiyo yaab leh iyo raacdooyin cabsi leh oo ku saabsan safarada degdega ah. Buuruhu waa riwaayado, dhagaxyo dhaadheer oo dhagaxyo leh, iyo booqasho iyaga (tusaale ahaan, magaalada Hatta) waxaa si wanaagsan loogu abaalmariyay aragtiyo cajaa'ib leh. Haweenka xiran dharka dharka lagu maydho waxay soo jiidan doonaan dareenka aan loo baahnayn ee xeebaha dadweynaha; waxaa lagugula talinayaa inaad bixiso hal maalin oo aad ku dhaafto xeebta hudheel gaar ah.
Waxaa jira waxyaabo badan oo yaabab bini-aadam ah oo lagu raaxeysto sidoo kale. Ferrari World ee Abu Dhabi waa baarkinka ugu weyn aduunka ee gudaha, iyo sida magacu tilmaamayo, wuxuu udub dhexaad u yahay soo marinta adduunka Ferrari waxaana ku jira gawaarida ugu dhaqsaha badan adduunka, xawaaraha 0 ilaa 149mph (240km / h) 4 ilbidhiqsi. Tani waxay garab socotaa Wareegtada Yas Marina, oo martigalisa Abu Dhabi Qaaciddada 'Grand Prix'. Wareegga Yas Marina waxaa si ballaaran loogu yaqaanaa wareegga teknolojiyad ahaan ugu horumarsan meeraha, iyo, oo uu weheliyo Formula One, wuxuu martigeliyaa taxane kala duwan oo heer qaran ah iyo mid caalami ah, oo ay ku jiraan taxanaha GP2 iyo GP3, iyo V8 Supercars. Burj Khalifa ee Dubai waa dhismaha ugu dheer adduunka, booqdayaashuna waxay ugu safri karaan saldhigga daawashada oo ku dhow meesha ugu sarreysa dhismaha si ay ugu raaxaystaan ​​aragtiyo qurux badan oo magaalada iyo meelo ka baxsan ah. Wild Wadi iyo Aquaventure waa laba goobo-biyood heer caalami ah oo u adeega qoyska oo dhan. Kuwa raadinaya daaweynta tafaariiqda habboon ayaa booqan kara Dubai Mall, waa mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee laga dukaameysto adduunka, iyo sidoo kale meesha ay ku taal ilaha ugu weyn adduunka ee qoob-ka-ciyaarka, oo leh bandhigyo fara badan oo bilaabmaya qorrax-dhaca ka dib, iyo mid ka mid ah aquariums-yada adduunka ugu weyn ee adduunka, Dubai Aquarium.
skiing Dubai in Dubai Emirates Mall waa sadaxaad ee ugu weyn adduunka baraf dushiisa lagu qiyaaso, cabirkiisu waa 400 m iyadoo la adeegsanayo 6000 tan oo baraf ah. Barafka Dubai Dalxiisku waa meeshii ugu horreysay ee Imaaraadku ka fuulo oo la furo, inbadanna waa la qorsheeyay. Dhammaan qalabka, marka laga reebo galoofisyada iyo koofiyad, ayaa la bixiyaa — barafka / barafka, kabaha barafka, kabaha iyo sharaabaadyada ayaa dhammaantood ku jira qiimaha (sharaabaadyada waa la tuuri karaa). Bakhaarka barafka ku dhegan ayaa iibiya qalab, oo ay ku jiraan galoofisyo. Jaranjarada barafka ee Ra's al Khaymah ayaa sidoo kale lagu jiraa shaqooyin.
Safarada "Desert safari" waxay khibrad xiiso leh u noqon kartaa dalxiisayaasha. Hore ayaa loo sii ballansan karaa, laakiin badanaa waa la dalban karaa sida ugu dambaysay maalintii hore, inta badan soo-dhoweynta hudheelada ayaa tan kuu diyaarin kara. Socdaalku wuxuu caadi ahaan bilaabmaa galabtii dambe wuxuuna dhammaadaa fiidka dambe. Waxaa lagaa soo ururin doonaa hudheelkaaga waxaana lagugu kaxayn doonaa lamadegaanka 4 × 4 gaari. Xirmooyinka badankood waxaa ka mid ah wadnaha wadista wadista dusha sare, geel yar oo gaaban, buudh carabi ah iyo cayaar caloosha ah. Ikhtiyaar kale wuxuu noqon karaa kireysiga / iibsashada 4 × 4 iyo ku biirista naadiyada badan ee 4 × 4 ee ku koraya UAE, kuwaas oo kala duwan oo mid waliba uu leeyahay dhadhankiisa u gaarka ah: ad4x4, uaeoffroaders, emarat4x4, iwm. Waxay bixiyaan khibrad waxbarasho oo bilaash ah dhammaan dadka cusub ee safarada toddobaadlaha ah la qorsheeyay si ay ugu habboonaadaan dhammaan heerarka xirfadaha wadista. Qaar iyaga ka mid ah waxay ka badan yihiin 2,000 oo xubnood oo ka kala socda dalal badan.
Lacagta ayaa ah Imaaraadka Carabta dirham hoos loo dhigo astaanta “ AED"Ama"dh”(Lambarka ISO: AED). Waxay ku xidhan tahay Doolarka Mareykanka oo ah 3.67 dirhams $ 1. Qoraallada waxay ku jiraan madaahibta 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, iyo 1,000 dirham. Waxaa jira hal dirham oo dirqi ah oo ka kooban cutubyo hoosaadyo ah 25 iyo 50 fils coins (100 fils = 1 dirham). Waxaa jira 5 fils iyo 10 fils oo qadaadiic ah laakiin kuwan si dhif ah ayaa loo arkaa (waxayna cudur daar u yihiin ganacsatada inay 'isbedel gaaban').
Jeegaga lacagta iyo jeega socotada waxaa lagu beddeli karaa is-weydaarsiga ku yaal garoonka diyaaradaha ama dhammaan suuqyada waaweyn ee laga dukaameysto. ATM-yada ayaa badan oo si deeqsinimo leh loo qaybiyey. Waxay aqbalaan dhammaan kaararka silsiladaha waaweyn: Visa, Cirrus, Maestro, iwm. Kaararka amaahda si ballaaran ayaa loo aqbalaa.
Hadaad kubixiso kaarka deynta dibada, ganacsatada badankood waxay isku dayi doonaan inay codsadaan beddelashada lacagta firfircoon, oo lagaa qaado boqolkiiba boqol in kabadan inta soosaaraha soosaara ay ku kacayso. Terminalka kaarka amaahdu wuxuu bixin doonaa doorashada haddii beddelaadda la aqbalayo iyo in kale. Ganacsaduhu wuxuu ma wax kaa weydiin doonaa arrintan, waxayna dooran doontaa inay aqbasho beddelaad. Haddii aad fiiro gaar ah u yeelato, waad soo dhexgeli kartaa oo aad weydiisan kartaa "Maya" in laga jawaabo. Haddii aad horay wax u weydiiso, ganacsatada qaar fikrad kama heli doonaan waxaad u jeeddo, laakiin qaar badan ayaa ogaan doona.
Badeecadaha aasaasiga ah ayaa ka raqiisanaa inta badan wadamada reer galbeedka, in kasta oo ay taasi si dhakhso leh isu beddeleyso (Dubai ayaa kor u qaaday qiimeynta si ay u noqoto magaalada 25aad ee ugu qaalisan ee lagu noolaado; Abu Dhabi waa dhow yahay). Heerarka hudheeladu ma ahan kuwo raqiis ah-waxaa jira yaraanta qolal hudheel oo la heli karo, gaar ahaan gudaha Dubai iyo Abu Dhabi, taas oo hudheelada ka dhigaysa in ka badan 90% degitaan. Tiro aad u tiro badan oo huteelo cusub ayaa loo qorsheeyay inay soo galaan safka shanta ilaa tobanka sano ee soo socota, laakiin maadaama dalxiiska uu sii kordhayo, lagama yaabo inay qiimayaashu hoos u dhacaan. Waxyaabaha dalxiiska oo dhan sidoo kale waxay u muuqdaan kuwo qaali ah. Kirooyinka gudaha Dubai waxay bilaabayaan inay la tartamaan magaalooyin sida Paris ama London, qiimaha kalena wuxuu u muuqdaa inuu raacayo. Meelaha qaarkood waxay leeyihiin hoy la wadaago oo la heli karo waana macquul.
Dukaameysiga Imaaraatka Carabta
Waxyaabaha ay caanka ku tahay Imaaraadku waa dukaamaysiga. Ma jiraan canshuuraha iibka ee Imaaraatka, laakiin way adag tahay in laga helo wax gorgortan dhab ah mar dambe maadaama sicir bararku uu marayo heerkii ugu sarreeyay. Haddii aad xiiseyneyso wax iibsiga, kama bixi kartid UAE adigoon booqan Dubai. Dubai waxay ku faantaa meelaha ugu wanaagsan ee laga adeegto dhammaan Bariga Dhexe, gaar ahaan inta lagu jiro xafladda dukaameysiga sanadlaha ah, badiyaa laga bilaabo bartamaha Janaayo illaa bartamaha Febraayo.
Carabi macaan oo isku dhafan. Dhanka bidix dhinaca bidix: bidix kofta, digaag shish tawuk, hilibka lo'da shish kebab, pilau (Bariiska carabta), khudaarta.
Dubai iyo, ilaa xad ka yar, Abu Dhabi waxay bixiyaan cunto aad u ballaaran oo ka timaadda inta badan cunnooyinka waaweyn ee adduunka. Marka loo eego heerarka reer galbeedka makhaayadaha badankood waa kuwo la awoodi karo in kastoo ay fududahay in la helo cunto aad qaali u ah sidoo kale. Inta badan maqaayadaha-dhamaadka-sare waxay ku yaalliin hudheelada.
Maaddaama ay jiraan dad badan oo ajnabi ah, makhaayadaha Hindiya iyo Baakistaan ​​aad ayey u badan yihiin, oo bixiya xulashooyin la awoodi karo oo suurta gal ah Sidoo kale caanku waa makhaayadaha Lubnaan, Suuriya iyo Urdun.
Waxyaabaha aadka loo jecel yahay waa digaag la dubay, oo laga heli karo inta badan maqaayadaha hawada furan ee wadada dhinaceeda taas oo lagu cusbooneysiin karo raacdooyinka kale sida Khubz (Kibista Carabiga) iyo hummus, bariiska bariis ee ugu caansan waa Biriyani, oo leh digaag la dubay ama kalluun ama wan. Shawarma dhaqameed iyo rooti falafel ah ayaa si fudud loo heli karaa waana kuwo raqiis ah oo macaan.
Cunnooyin dhaqameedyo aad uyar oo Imaaraati ah ayaa laga cunteeyaa makhaayadaha; tan ugu dhowna waa cunnooyinka u eg qaabka Mendi ee Yaman, oo ay ku jiraan saxanno bariis udgoon leh oo lagu daboolay wan, digaag ama kalluun si gaabis ah loogu dubay god. Haddii aad leedahay saaxiibo Imaaraati ah, in lagugu marti qaado guryahooda guud ahaan waxay noqon doontaa fursadda ugu wanaagsan ee aad ku baaraandegto cunnooyinka maxalliga ah.
Xagee joogaa Imaaraadka Carabta
Aragtida habeenkii ee Dubai
Booqdaha, Imaaraadku wuxuu leeyahay mid ka mid ah safafka ugu xiisaha badan ee hoyga dalxiiska adduunka. Waxaa jira hudheello qurux badan, hudheelo casri ah, oo qaali ahaan qaali noqon kara, oo ay weheliyaan guryo aad u dhexdhexaad ah. Meeleyn qiimo jaban ayaa la heli karaa laakiin, meel kasta oo ay joogaan, waxay ku kala duwan yihiin qaylo-dhaan ku saabsan xaaladdooda.
Waxaa jira tiro hudheello hudheello heer sare ah, gaar ahaan kuwa shiraaca u eg ee Burj al-Arab (Tower of the Arab), a Dubai sumcad caan ah oo loo yaqaan "hudheel 7-xiddigood ah" - oo ah qayb aan jirin, laakiin wali heer sare ayay ku tahay. Qasriga Emirates ee Abu Dhabi sidoo kale wuxuu higsanayaa heerar isku mid ah, qiimo jaban.
Imaaraatka carabta, gaar ahaan imaarada Dubai iyo Abu Dhabi, waa xarun waxbarasho oo ku taal Bariga Dhexe. Saddexda jaamacadood ee ay maalgaliso dawlada hoose ayaa ah Jaamacadda Imaaraadka Carabta gudaha Al Ain, the Kulliyadaha Sare ee Teknolojiyada oo leh xarumo kala duwan oo ku yaal Imaaraadka oo dhan, iyo Jaamacadda Zayed xarumo ku leh Dubai iyo Abu Dhabi.
Jaamacadaha maxalliga ah ka sokow, Imaaraadku wuxuu kaloo marti-geliyaa laamo dhowr ah oo caan ka ah jaamacadaha Mareykanka iyo Yurub. Kuwani waxay ugu horreyn ku urursan yihiin magaalooyinka Dubai iyo Abu Dhabi.
Waxaad u baahan doontaa fiiso shaqo si laguu oggolaado inaad ka shaqeysid UAE, oo helitaanka mid wuxuu u baahan yahay kafaala-qaade maxalli ah inuu ku codsado magacaaga. Xusuusnow haddii aad ku sugan tahay UAE fiisada shaqada, waxaad u baahan doontaa inaad hesho fiiso aad ku baxdo oo aad uga baxdo waddanka, helitaanka midkoodna wuxuu kaaga baahan doonaa inaad hesho rukhsadda loo-shaqeeyahaaga. Waxaa jiray kiisas dad loo diiday fiisooyinka bixitaanka sababo la xiriira khilaafaadka ka dhex jira cidda ay u shaqeeyaan.
Imaaraadku ma bixiyo deganaansho rasmi ah, in kasta oo ajaanib badani ay arrintan ku wareegaan iyagoo ku jira fiisooyinka shaqo ee "joogtada ah" xitaa hawlgab. Dabcan, tani waxay u baahan tahay inaad xiriir wanaagsan la yeelatid maxalli aad u xoog badan. Helitaanka dhalashada Imaaraadku waxay kaliya u suurta galeysaa dumarka ajnabiga ah ee guursaday ragga Imaaraatka ah (laakiin ma ragga ajnabiga ah ee guursaday dumarka Imaaraatka ah), laakiin haddii kale waxay ku xigtaa wax aan macquul aheyn shisheeyaha kale.
Emiratis waa ku faanaan laakiin dadka waa ay soo dhoweeyaan, marka aysan ku jirin gawaaridooda, guud ahaan waa kuwo aad u sokeeye oo saaxiibtinimo leh. Sida dadyowga adduunka badankood, waxay soo dhaweynayaan martida diyaar u ah inay muujiyaan xoogaa ixtiraam ah oo aad u deeqsinimo badan. (Dadka ajnebiga ah qaarkood iyo dadka soo booqda ma fahmi karaan in muujinta dharka ay ku noqon karto wax aad u xun dadka qaar, xitaa haddii aan waxba loo sheegin kuwa ku xadgudbay.) Dhaqankoodu waa mid gaar ah oo wuxuu noqon karaa mid aad u muxaafid ah, laakiin guud ahaan waxay la jaan qaadayaan jidadka, caadooyinka. , dhacdooyinka, warbaahinta, iyo asluubta adduunka.
Ragga maxalliga ah badanaa waxay xirtaan "Kandoura", khamiis dheer (caadi ahaan caddaan), iyo ghutra, madax-cas ama casaan la huwiyay. Haweenka maxalliga ah waxay xirtaan dhar madow oo u eg dharka (abaya) iyo masar madaxa u madoow (shayla).
Imaaraadku waa ka dhawrsoon yahay inta badan bulshooyinka reer Galbeedka, in kasta oo aanu aad uga badnayn qaar ka mid ah deriskeeda. Socdaalayaashu waa inay ka warqabaan oo ay ixtiraamaan aragtida soo jireenka ah ee Imaaraatka, maxaa yeelay waxaa jira dabeecado laga yaqaan Galbeedka (tusaale ahaan, sameynta "tilmaamyo qallafsan iyo aflagaado") taasoo sababi doonta in lagu xiro Imaaraadka. Dhinaca kale, socdaalayaasha reer Galbeedku waxay heli doonaan inta badan Imaaraatka oo aad u deggan.
Inkasta oo dumarka aan sharci ahaan looga baahnayn inay xidhaan xijaabka, Muujinta moodooyinka sida taangiyada dushooda iyo gaagaaban waa in laga fogaadaa. Goonnada jilibka ka hooseeya xoogaa waa la aqbali karaa, in kasta oo aad weli ku sii jiri doontid indha indhayn. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhowr dalxiis ama aagag ay ku badan yihiin qurbajoogta oo xitaa dharka "daandaansiga ah" laga arki karo, in kasta oo aan loo baahnayn in la ixtiraamo. Kuwaas waxaa ka mid ah meelo badan oo Imaaraatku leeyahay Dubai iyo, tusaale ahaan, dalxiisyada xeebta ku yaal ajman ama Fujairah. Qaawanaanta bulshada meelkasta waa mamnuuc waana la ciqaabi doonaa. Sharjah waa tan ugu muxaafidka ah Imaaraatka oo leh qawaaniin anshax dowladeed leh (yacni, mamnuucaya in si xad dhaaf ah loo muujiyo dharka ama noocyada qaar ee xeebta lagu xidho), laakiin in yar oo ka mid ah ayaa la dhaqan galiyaa (in kasta oo ay taasi ku kala duwan tahay).
Imaaraadku maahan kuwa khaniisiinta jecel, waxqabadka khaniisiinta ee la oggol yahayna waxaa suuragal ah in lagu xukumo dil. Si kastaba ha noqotee, ikhtiyaar ayaa fure u ah: sida waxyaabo badan oo ka mid ah bulshada Imaaraatka, waxa ka dhaca albaabada xiran waa - waa hagaag - maxaa dhaca. Dhinaca kale, ma ahan wax aan caadi ahayn in ragga ama dumarka Imaaraatku ay muujiyaan kalgacal jireed laakiin aan ka muuqan jinsi ahaan-ragga Imaaraatka ah inta badan midba midka kale ayuu sanka ka dhunkadaa salaanta halka dumarkuna ay isku salaamaan dhabannada dhunkashada oo ay gacmaha is qabsadaan ama ay gacmaha isku qabtaan
Ammaan ahaw oo iska ilaali khayaanada Imaaraatka Carabta
Abu Dhabi gaariga booliska
Soo-booqdayaashu waa inay ka walaac yaraadaan dambiyada, marka loo eego kuwa sharciga adag.
Khaniisnimada waa dambi fuliya ciqaabta dilka ee Imaaraatka, sidaa darteed dalxiisayaasha khaniisiinta iyo kuwa isu galmooda waa inay ahaadaan kuwo caqli badan.
Galmada ka baxsan guurka sidoo kale waa sharci darro. Xitaa haweenka soo sheega kufsiga waxaa loo xiray sino ama galmo ka baxsan guurka. Digtooni hubaal waa lagula taliyay.
Waxaa jira dhowr waxyaalood oo ay tahay inaad ka digtoonaato inaad ku sameyso sharciyada daroogada ee Imaaraadka. Qaar ka mid ah dawooyinka xanuunka baabi'iya ee dalalka reer galbeedka waa mukhaadaraadka sharci darrada ah ee Imaaraadka sida codeine. Waxba ha soo wadanin ilaa aad qaadato nuqul ka mid ah daawadaada ama aad ku biiri kartid kuwa kale ee lagu xukumay xabsi. Taa bedelkeeda, antibiyootigyada ayaa si xor ah looga heli karaa miiska farmashiyaha. Haddii aad ka hesho warqad rijeeto ah oo loogu talagalay daawooyinka la xakameeyo ee UAE, sida qaar ka mid ah xanuun baabi'iyeyaasha iyo daawooyinka murugada, iska hubi inaad haysato nuqul ka mid ah warqadda daawada oo aad la socoto marka aad ka baxeyso dalka.
Dabin kale oo aan loo digin ayaa ah in haddii lagugu tuhunsan yahay inaad daroogo ama khamri ku hoos jirto, dhiig lagaa qaadi karo, iyo haddii ay muujiso caddeynta walxaha sharci darrada ka ah Imaaraadka, markaa waxaad u badan tahay inaad ku xirnaan doonto xabsiga xitaa haddii walxahaas lagu liqay dalkii aad markii hore ku jirtay. Marka lagu daro baaritaanka dhiiggaaga, waxay u badan tahay inay baari doonaan alaabtaada. Dadka ayaa loo xiray haysashada ka dib markii laga helay daroogo microscopic daroogada iyaga oo leh qalab aad u xasaasi ah.
Sababta kale ee walaaca leh ayaa ah heerka aadka u sarreeya ee shilalka baabuurta: ka sokow taxaddar la'aanta marka aad baabuur waddo, ka gudubka wadada lugta waxay noqon kartaa mid aad khatar u ah sidoo kale.
Caafimaadka ku ahaaw Imaaraadka Carabta
General daryeelka caafimaadka in Dubai, Abu Dhabi, iyo Sharjah aad bay u wanaagsan tahay, oo leh rugo caafimaad oo loogu talagalay daryeelka guud iyo kuwa gaarka ah oo si ballaaran loo heli karo, oo ay ku jiraan qaar hadda furan 24 saacadood. Isbitaallada xarumaha waaweyn waa kuwo si fiican u qalabeysan si ay ula tacaalaan xaalad kasta oo degdeg ah oo caafimaad. Waxaa jira nidaam ambalaas dhammaan xarumaha dadka waaweyn; si kastaba ha ahaatee, dabooliddu waxay noqon kartaa mid aad u adag meelaha fogfog. Ambalaasyada waxaa loogu talagalay gaadiid halkii ay daryeel ahaan u siin lahaayeen jawaabeyaasha ugu horreeya, sidaa darteed ha filanin daryeelka-sare ee goobta.
Isbitaalka weyn ee dowlada ee ku yaal Abu Dhabi waa wax fiican; sidoo kale waa Magaalada Caafimaadka ee Sheikh Khalifa, oo ay hada maamusho Cleveland Clinic.
In Dubai, isbitaalada dowlada waa isbitaalka Rashiid, oo leh Xarun cusub oo dhaawac ah iyo Dubai Isbitaal aad u wanaagsan. Isbitaalka Welcare Isbitaalka Caalamiga ee Casriga ah ee American Hospital Zulekha Hospital NMC Hospital, iyo Isbitaalka Belhoul ee waaxda gaarka loo leeyahay dhammaantood waxay leeyihiin sumcad wanaagsan. Waddanku waa ka xor yahay duumada cudurka loo yaqaan 'prophylaxis' looma baahna. Magaalada Sharjah, Isbitaalka Kuwaiti (Goverrnment) wuxuu qaabilaa qurbajoogta. Isbitaalada gaarka loo leeyahay ee Sharjah waa isbitaalka Zahra, Zulekha Hospital iyo Central Private Hospital. Qiimayaasha ay ka mid yihiin daryeelka caafimaadku guud ahaan way ka jaban yihiin Sharjah in kasta oo cosbitaalada oo dhami ay la kulmaan heerarka Wasaaradda Caafimaadka Isbitaalka dhexe ee gaarka loo leeyahay iyo Isbitaalada Zulekha ayaa loo arkaa inay yihiin kuwo la awoodi karo
Al Ain waxaa u adeegta isbitaalo iyo xarumo daryeel oo casri ah: Isbitaalka Tawam, oo hadda uu maamulo John Hopkins, oo martigaliya Jaamacadda Imaaraatka Kuliyada Caafimaadka iyo Sayniska Caafimaadka; Isbitaalka Al Ain (sidoo kale loo yaqaan Al Jimi Hospital sida uu ku yaal degmada Al Jimi), oo hadda ay maamusho Jaamacadda Caafimaadka ee Vienna; iyo Isbitaalka gaarka loo leeyahay ee Oasis, oo horey loogu aqoon jiray Isbitaalka Kennedy, kaasoo ay aasaaseen oo ay maamulayeen adeegayaal Masiixiyiin ah, isla markaana ahaa isbitaalkii ugu horreeyay magaalada.
The biyaha waa ammaan in laga cabbo Imaaraadka, in kasta oo dadka badankood ay doorbidaan biyaha dhalada dhadhankooda. Cuntada waa nadiif waana maqaayadaha badankood waxaa loogu adeegaa heerarka Reer Galbeedka, gaar ahaan meelaha loo dalxiis tago; si kastaba ha noqotee, nadaafadda waxay dhibaato ka taagnaan kartaa xarumaha qaar ee ka baxsan, gaar ahaan meheradaha waddooyinka ku yaal. Taasi waxay tiri, cunto ku sumowgu wuu dhacaa, ee isticmaal caqligaaga guud!
The kuleylka xagaaga waxay gaari kartaa 50 ° C (122 ° F), marka iska ilaali dhaqdhaqaaqa banaanka dhererka maalinta oo iska ilaali calaamadaha kuleylka kuleylka. Hubso inaad cabto biyo badan maxaa yeelay fuuqbaxu si fudud ayuu ugu dhacayaa kuleylka noocaas ah. Haddii aad ka safreyso waddo (waddanka intiisa badani waa lamadegaan), hubi inaad sidato biyo kugu filan oo kuu oggolaanaya inaad ku lugeeysid waddada haddii ay baabuurtu jiiraan.
In kasta oo Imaaraadku xoogaa la qabsan karo socotada naafada ah marka loo eego waddamada kale ee Mideast, si kastaba ha noqotee waxay noqon doontaa waddan adag in lagu maro kursiga curyaamiinta. Jaangooyooyinku way sarreeyaan oo way yar yihiin, haddii ay jiraan, jaranjarooyin ama meelo kale oo la waafajiyo. Tan waxaa ka mid ah ku dhowaad dhammaystirnaan la'aanta musqulo naafada u ah naafada.
Isgaarsiinta Imaaraadka Carabta
Lambarka waddanku waa 971. Shabakadda taleefanka gacanta waxay adeegsataa teknolojiyadda GSM (sida Yurub iyo Afrika) adeegsigaana aad ayuu u faafaa. Qaabka garaaciddu waa: +971 - # - ### ####, halkaasoo ah meesha “#” ugu horeysa uu tilmaamayo nambarka aagga. Furayaasha aagagga muhiimka ah waxaa ka mid ah Dubai (4), Sharjah (6) iyo Abu Dhabi (2). Wicitaanada taleefannada gacanta waxay adeegsadaan lambarrada aagga wadaha: (50/56/58) ee Etisalat iyo (55) Du. Sida wadamada kale, marka la garaacayo gudaha, "00" waxaa loo isticmaalaa in lagu helo lambar caalami ah (waxaana ku xigta lambarka waddanka) iyo "0" waxaa loo isticmaalaa in lagu helo lambar qaran (oo ay ku xigto nambarka aagga).
Makhaayadaha internetka ayaa si caadi ah ugu badan magaalooyinka waaweyn, iyo faafreebka webka mararka qaarkood waa wax aan caadi ahayn, laakiin marar dhif ah ayaa laga sheegaa. Dhamaan boggaga internetka ee Israel .il waa la xannibay. Wax badan lagama oga sida looga gudbo xannibaadan dadka u baahan inay booqdaan boggaga Israel. Fariimaha degdega ah iyo adeegyada codka-badan-IP sida Skype mararka qaarkood way shaqeeyaan. Shirkada isgaarsiinta ee dowladu leedahay ayaa xayiray helitaanka adeegyadan heerar kala duwan. Xannibaadda had iyo jeer ma joojiso wicitaanada wayna kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran shabakadda loo isticmaalo. Waxay sidoo kale u muuqataa inay awoodi karto inay joojiso wicitaanada Skypeout iyadoo u oggolaaneysa wicitaanada Skype-Skype. Xitaa haddii adeegyada aan la xannibin, xawaaraha isku xirka wuxuu noqon karaa arrin. Dadka badankood waxay adeegsadaan adeegga VPN si ay uga gudbaan xayiraadaha internetka ee maxalliga ah.
Etisalat iyo Du labaduba waxay bixiyaan iskuxirka internetka ee USB.
Isutagga Imaaraatka Carabta wuxuu leeyahay nidaam boosteejo ah oo hufan oo ay maamusho Kooxda Emirates Post. Waxaa jira daraasiin xafiisyo boosteejo ah oo ku baahsan magaalooyinka waaweyn. Waxay ku kacaysaa 4.50 dirhams heerarka caadiga ah si loogu diro warqad caadi ah oo culeyskeedu yahay 29-30 gr (1 oz) gudaha iyo inta udhaxeysa imaaraadka dalka gudihiisa; 5 dirhams ilaa dalalka deriska la ah Khaliijka (Saudi Arabia, Kuweyt, Cumaan, Baxrayn); 9 dirham oo marinka gacanka u sii gudbaya Iran; iyo 11 ilaa 13 dirhams inta badan wadamada kale. U dirista aagagga iskahorimaadka ee u dhow (Ciraaq, Suuriya, Yemen) waxaa lagu diri karaa oo keliya qiimaha ugu sarreeya laga bilaabo 165 dirham. Soo dirista xirmooyinka ayaa qaali noqon kara, iyadoo lagu tirinayo kiilo iyo masaafad ahaan.
Tilmaamaha Safarka ee Abu Dhabi Xalaal
Tilmaamaha Safarka Ajman Xalaal
Hagaha Socdaalka Xalaal ee Dubai
Hagaha Safarka Fujairah Xalaal
Tilmaamaha Safarka Xalaasha ee Ra's al Khaymah
Hagaha Socdaalka Sharjah Xalaal
Tilmaamaha Safarka Umm al Quwain Xalaal
eHalal Safarka Mart > Imaaraatka Carabta Xalaal Safar
Goobaha loo yaqaan 'Oasis Lodges Marrakech' waa goob dalxiis oo aan khamri laga cabsan karin oo leh qurxin dhab ah, barkadeeda gudaha waxay u furan tahay haweenka kaliya xilliyada la dejiyay.
Safarka Xalaal ee Tunisia